Yesu ka kyerɛɛ ɔdebɔneyɛfo no sɛ ɔbɛkɔ soro anaa? | N & M
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kisi Korean Krio Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Myanmar Ngabere Norwegian Nzema Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
Yesu Ka Kyerɛɛ Ɔdebɔneyɛfo no sɛ Ɔbɛkɔ Soro Anaa?
Nea akɔfa asɛm yi aba ne sɛ, ɔdebɔneyɛfo a wɔbɔɔ no asɛndua mu wɔ Yesu nkyɛn no, Yesu hyɛɛ no bɔ sɛ daakye obenya nkwa wɔ Paradise. Yesu kae sɛ: “Nokwarem mise wo nnɛ sɛ, wobɛka me ho wɔ Paradise.” (Luka 23:43) Hyɛ no nsow sɛ Yesu anka baabi a saa Paradise no wɔ. Yesu asɛm no kyerɛ sɛ na ɔdebɔneyɛfo no ne no bɛkɔ soro anaa?
Nea edi kan no, ma yɛnhwɛ sɛ ɔdebɔneyɛfo no fata sɛ ɔkɔ soro anaa. Nnipa a wɔbɛkɔ soro no, wɔde nsu ne honhom kronkron abɔ wɔn asu ma enti wɔabɛyɛ Yesu asuafo a wɔde honhom awo wɔn. (Yohane 3:3, 5) Ade foforo a ɛsɛ sɛ wɔyɛ na wɔatumi akɔ soro ne sɛ wɔbɛma wɔn abrabɔ ne Onyankopɔn mmara ahyia na wɔadi nokware, agyina wɔn mũdi mu, na wɔadwen nnipa ho. (1 Korintofo 6:9-11) Ɛsɛ sɛ wodi Onyankopɔn ne Kristo nokware kosi sɛ wobewu. (Luka 22:28-30; 2 Timoteo 2:12) Gye sɛ wɔyɛ eyinom nyinaa ansa na wɔatumi afata sɛ wobenyan wɔn akɔ soro akɔyɛ adwuma kɛse a ɛda hɔ retwɛn wɔn sɛ wɔne Kristo bɛyɛ asɔfo ne ahemfo na wɔadi adesamma so mfe apem.—Adiyisɛm 20:6.
Nanso, ɔdebɔneyɛfo a wɔbɔɔ no asɛndua mu wɔ Yesu nkyɛn no, odii bɔne kosii owu mu. (Luka 23:32, 39-41) Ɛwom, sɛnea ɔkasa kyerɛɛ Yesu no kyerɛe sɛ na obu no. Ɔkae sɛ: “Sɛ woba w’ahenni mu a, kae me.” (Luka 23:42) Nanso, na ɔnyɛ obi a wɔabɔ no asu na wɔde honhom awo no ma wabɛyɛ Yesu suani. Saa ara nso na na ommuu ɔbrapa biara nkyerɛe sɛ ɔyɛ nokwaredifo. Enti ɛbɛyɛ dɛn na Yesu ahyɛ no bɔ sɛ ɔde no bɛkɔ soro akɔka n’asuafo a wodii nokware kosii awiei no ho, na ɔne wɔn adi hene?—Romafo 2:6, 7.
Mfatoho bi ni: Sɛ obi wia wo sika na ɔpa wo kyɛw a, ebia wode bɛkyɛ no. Nanso wugye di sɛ ɔyɛ obi a wubetumi de w’abusua anaa w’adwuma ahyɛ ne nsa sɛ ɔnhwɛ so? Sɛ wode biribi a ɛte saa bɛhyɛ obi nsa a, gye sɛ obi a wugye no di paa. Enti sɛ obi bɛkɔ soro a, gye sɛ wakyerɛ sɛ, sɛ wɔma no kwan sɛ onni adesamma so a, ɔde Onyankopɔn mmara a ɛyɛ pɛ no bɛyɛ adwuma. (Adiyisɛm 2:10) Ɛwom, ansa na ɔdebɔneyɛfo no rewu no, ofii ne komam srɛɛ Yesu sɛ onhu no mmɔbɔ, nanso wanyɛ biribiara a ɛkyerɛ sɛ ɔfata sɛ ɔkɔ soro.
Yesu ka kyerɛɛ ɔdebɔneyɛfo no sɛ ɔbɛka ne ho wɔ soro saa da no anaa? Ɛrentumi nyɛ yiye saa, efisɛ Yesu ankɔ soro saa da no. Mmom no, ɔkɔɔ “asase yam” anaa adamoa mu kodii nnansa. (Mateo 12:40; Marko 10:34) Yesu sɔree no mpo, odii adaduanan wɔ asase so ansa na ɔrekɔ soro. (Asomafo Nnwuma 1:3, 9) Enti ɛrentumi mma sɛ saa da no ara ɔdebɔneyɛfo no kɔkaa Yesu ho wɔ soro.
Ɛnde, Paradise bɛn na ɔdebɔneyɛfo no bɛkɔ no? Sɛ wonyan no fi awufo mu a, ɔbɛtena asase so Paradise, na Yesu nso na obedi so hene. (Asomafo Nnwuma 24:15; Adiyisɛm 21:3, 4) Paradise ne nea ehia sɛ obi yɛ ansa na Onyankopɔn ama wakɔ hɔ no, sɛ wopɛ sɛ wusua ho ade pii a, hu Yehowa Dansefo biara.